Filazantsara - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Vaovao Mahafaly)
Ny Filazantsara na Evanjely na Vaovao Mahafaly dia fitambaran' ny boky efatra (Matio, Marka, Lioka, Joany (na Jaona)) hita ao amin' ny Testamenta Vaovao ao amin' ny Baiboly kristiana, natao hizaràna amin' ny olona rehetra ny momba ny Fanjakan' Andriamanitra sy i Jesoa Kristy. Ny Kristiana dia mamaky sy mihaino ny Filazantsara satria mino fa hahazo fanampiana amin' ny fiainany manontolo ary hifandray amin' ny Mpahary sy ny voary. Atao hoe Evanjelista na Evanjelistra ny mpanoratra ny Filazantsara. Amin' ny heviny mivelatra dia ilazana ny Testamenta Vaovao ihany koa ny teny hoe filazantsara na vaovao mahafaly.
2 Ireo filazantsara na evanjely kanônika
2.1 Fanasokajiana ny evanjely kanônika
2.3 Famintinana ny Filazantsara efatra
2.3.1 Filazantsara araka an' i Matio
2.3.2 Filazantsara araka an' i Marka
2.3.3 Filazantsara araka an' i Lioka
2.3.4 Filazantsara araka an' i Joany
3 Ireo filazantsara apôkrifa
Ny teny hoe filazantsara na vaovao mahafaly dia teny enti-mandika ny teny grika hoe εὐαγγέλιον / euangélion izay midika hoe "vaovao tsara", "vaovao mahafaly". Ny hoe evanjely, izay fampiasan' ny Eglizy katôlika rômana eto Madagasikara matetika, dia fanagasiana avy hatrany io teny grika io. Vaovao mahafaly ho an' ny Kristiana satria "Tenin' Andriamanitra", manambara ny fanavotana an' izay mibebaka amin' ny fahotany sy mino an' i Jesoa Kristy ho zanak' Andriamanitra.
Ireo filazantsara na evanjely kanônikaModifier
Maro ny filazantsara na evanjely, nefa ny efatra amin' ireo ihany no noraisin' ny Kristiana ho boky mendrika ny ho hita ao amin' ny Baiboly, ny hafa rehetra, izay tsy voaray, dia atao hoe apôkrifa. Ny Filazantsara efatra dia tsy afangaro amin' ireo boky ao amin' ny Testamenta Vaovao toy ny Asan' ny Apôstôly, ireo Epistily ary ny Apôkalipsin' i Joany (na Apôkalipsin' i Jaona).
Fanasokajiana ny evanjely kanônikaModifier
Misokajy roa ny Filazantsara, dia ireo Filazantsara sinôptika (na Vaovao Mahafaly sinôptika) sy ny Filazantsara araka an' i Joany (na Jaona). Telo ireo Filazantsara sinôptika, dia ny Filazantsara araka an' i Matio (na Filazantsaran' i Matio) sy ny Filazantsara araka an' i Marka (na Filazantsaran'i Marka) ary ny Filazantsara araka an' i Lioka (na Filazantsaran' i Lioka).
Mitantara ny fiainan' i Jesoa Kristy, mampita ny asa sy ny fampianarana nataony, mitatitra ny fahafatesany sy ny fitsanganany indray, ary milaza ny mbola hiverenany handray ireo mino azy, ary manambara ny amin' ny Fanjakan' Adriamanitra ny Filazantsara efatra.
Famintinana ny Filazantsara efatraModifier
Filazantsara araka an' i MatioModifier
Fifandimbiasana fitantarana sy fifanjohian-toriteny no mamorona ny Filazantsaran' i Matio. Betsaka ireo toriteny nataon' i Jesoa taterin' ity evanjely ity ka isan' ireny ireo manambara ny vaovao mahafalin' ny famonjena sy ny fanjakan' Andriamanitra, ireo fanoharana isankarazany, ny torohevitra ho an' ny Fiangonana ary ny amin' ny Andro farany. Ny Evanjelin' i Matio dia mitantara ny fahaterahan' i Jesoa sy ny fahazazany, ny fihaonany tamin' i Joany mpanao batisa, ny fiantsoany ireo mpianany, ny fahagagana sy fanasitranana nataony, ny fijaliany, ny fitsanganany ho velona ary ny fanirahany ireo mpianany hitory ny Vaovao Mahafaly eran' izao tontolo izao. Tokony ho teo anelanelan' ny taona 70 sy 90 no nanoratana ny Evanjelin' i Matio.
Filazantsara araka an' i MarkaModifier
Mitantara ny Evanjely araka an' i Marka fa tao Galilea i Jesoa no niseho voalohany, nisedra ny fanoheran' ireo tsy tia azy, nanao fanoharana sy fahagagana ary niady hevitra tamin' ireo mpanohitra azy koa. Niasa tany ivelan' i Galilea koa i Jesoa ka tany izy dia mbola nanao fahagagana, niady hevitra tamin’ ireo Fariseo, niresaka ny amin' ny fanjakan’ Andriamanitra sy ny hamafin' ny fanarahana azy. Ny Filazantsaran' i Marka dia mitantara fa tao Jerosalema i Jesoa no nanadio ny Tempoly, nitsikera ireo Fariseo, nilaza ny amin’ ny zavatra hiseho amin’ ny andro farany. Tao izy no nosamborina sy notsaraina. Mitantara ny nampijaliana an' i Jesoa sy ny nahafatesany ary ny nitsanganany ho velona koa ny Filazantsara araka an' i Marka. Teo anelanelan' ny taona 60 sy 75 no nanoratana azy.
Filazantsara araka an' i LiokaModifier
Miresaka ny amin' ny fitiavan' Andriamanitra ny olombelona rehetra ny Filazantsaran' i Lioka. Izany no nahatonga an' i Jesoa ho tonga eto amin' izao tontolo izao mba hamonjy ny olona rehetra. Maro ny ohatra nataon' i Jesoa momba izany fitiavana izany: ilay Samaritana tsara fanahy, ilay ondry very, ilay zanaka mpandany. I Lioka ihany no mintantara ny amin' ny namangian' i Jesoa ny tokantranon' ilay mpamory hetra sy ny nilazany koa fa na ny mpanao heloka be vava aza dia afaka ny hanantena hiditra any am-paradisa. Miresaka misimisy kokoa ny amin' ny Fanahin' Andriamanitra noho ny boky hafa ao amin' ny Testamenta Vaovao ny Filazantsaran' i Lioka: ny herin' ny Fanahy Masina tao amin' i Joany mpanao batisa, ny resaky ny anjely tamin' i Maria izay nilaza fa ho tonga aminy ny Fanahy Masina, ny nilazan' i Jesoa fa ny Fanahy Masina no fanomezana lahibe indrindra. Ao no tena ahitana fa nivavaka mandrakariva i Jesoa amin' izay rehetra ataony sy nampianatra mivavaka koa. Ao koa no ahitana ny fitiavan' i Jesoa ireo mahantra. Asehon' i Lioka amin' ny alalan' ny fitantarany ny nihinanan' i Jesoa trondro fa olombelona mitafy nofo i Jesoa izay nitsangana tamin' ny maty fa tsy matoatoa. Teo anelanelan' ny taona 70 sy 100 no mety nanoratana ny Evanjelin' i Lioka.
Filazantsara araka an' i JoanyModifier
Ny Filazantsara araka an' i Joany (na Jaona) dia mamaly ny fanontaniana hoe: "Iza moa i Jesoa?" Ataon' i Joany hoe "ny Teny" izay namoronan'Andriamanitra an' izao tontolo izao sy nanomezany aina ny olona rehetra i Jesoa. I Jesoa no ilay Zanak' ondrin' Andriamanitra izay manafaka ny fahotan' izao tontolo izao. Izy ilay efa voasoratr' i Mosesy (na Môizy) sy ny mpaminany. Izy no Zanak' Andriamanitra sady mpanjakan' i Israely. Ao amin' io filazantsara io no ahitana ilay vehivavy Samaritana izay homen' i Jesoa rano velona, ny nananganany an' i Lazarosy (na Lazara) tamin' ny maty, ny tsy fatokian' i Tômasy (na Tômà) ny amin' ny fitsanganan' i Jesoa tamin' ny maty. Manao ny tenany ho mofo velona sy fahazavan' izao tontolo izao sy mpiandry tsara ary divay tsara koa i Jesoa. Ny Filazantsaran' i Jaona dia mitantara ny fahagagana fito nataon' i Jesoa izay ataony hoe "famantarana". Ny handresy lahatra ny mpamaky ny amin' ny maha Mesia sy Zanak' Andriamanitra an' i Jesoa no tanjon' ny Filazantsaran' i Joany. Teo anelanelan' ny taona 80 sy 110 no nanoratana azy.
Ireo filazantsara apôkrifaModifier
Ireo soratra atao hoe filazantsara apôkrifa na evanjely apôkrifa dia tsy tafiditra ao amin' ny Baiboly, tsy boky kanônika izy ireo. Ny teny hoe apôkrifa dia teny grika nogasina (ἀπόκρυφος / apókryphos) izay midika hoe "miafina" na "nafenina". Ny sasany amin' ireo evanjely apôkrifa ireo dia nosoratan' olona ao amin' ny fivavahana gnôstika (fivavahana manankina ny famonjena amin' ny fahalalana) tsy isan' ny Apôstôlin' i Jesoa Kristy.
Ireto ny ohatra amin' izany: Filazantsaran' ny Fahamarinana, Filazantsaran' i Nikôdemôsy, Filazantsaran' i Filipo, Filazantsaran' i Tômasy, Filazantsaran' i Barnabà, Filazantsaran' i Gamaliela, Filazantsaran' i Jodasy, Filazantsaran' i Maria, Filazantsaran' i Petera, Filazantsara miafin' i Marka, Filazantsara Arabo momba ny Fahazazana, Filazantsara Armeniana momba ny Fahazazana, Filazantsaran' ny Fahazazana araka an' i Tômasy, sns.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Filazantsara&oldid=1012882"
Dernière modification le 21 Jolay 2021, à 10:48
Voaova farany tamin'ny 21 Jolay 2021 amin'ny 10:48 ity pejy ity.